"Tahaka ny nanandratan'i Moizy ny bibilava..." - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady 14 marsa 2021
Alahady Fahefatra Karemy 4B
2Tant. 36,14-23 ; Ef. 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21
Antsasa-dalan’ny efapolo andron’ny Karemy ny kristianina amin’izao Alahady fahefatra izao ka entanin’ny litorjia mba hiato kely amin’ny ezaka atao mandritra ny karemy ary hientan-kafalina mibanjina sahady ny voninahitr’i Jesoa Kristy tafatsanga-ko velona rehefa avy nasandratra teo ambony hazofijaliana.
Tohizin’i Jesoa hatrany anefa ny fampianarany momba ny misterin’ny Paka ; ny fijaliany, ny fahafatesany ary ny fitsanganany ho velona. Entin’i Jesoa manazava izany misterin’ny Paka izany, amin’ny evanjely androany, ny fihetsik’i Moizy nanandratra ilay bibilava varahina tany an’efitra ; tandindon’ny fanandratana Azy Tompo eo ambony hazo fijaliana ho famonjena ny olombelona rehetra.
« Tahaka ny nanandratan’i Moizy ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’olona... ». Mampitaberina any amin’ny tantaran’ny vahoaka israely tany an-taniefitra ny fanazavan’i Jesoa : An-tsasa-dalana namakivaky ny taniefitra ny vahoaka Israely tamin’izay. Tsy nitsahatra nimonomonona tamin’ny Tompo Andriamanitra sy tamin’i Moizy izy ireo. Nosazian’Andriamanitra, hoy ny fitantarana, nandefasany bibilava mahamay ka nahafatesana vahoaka maro. Nahatsapa ny hadisoany anefa izy ireo ka nitalaho tamin’i Moizy mba hoesorin’ny Tompo ny bibilava. Tamin’izay dia nasain’ny Tompo nandrendrika bibilava varahina i Moizy, nahantony tamin’ny hazo ka izay rehetra nibanjina ny bibilava varahina dia sitrana sy velona (Fanisana 21,4-9).
« Fanandratana » no teny ampiasain’i Jesoa hanambarany ny misterin’ny fijaliany. Manandratra ny fitiavan’ny Ray an’izao tontolo izao ; manandratra ihany koa ny hasina maha olona ny olombelona. Tsy maintsy asandratra i Jesoa; ahantona ambony hazo fijaliana ka izay rehetra mibajina Azy dia ho velona « hanana ny fiainana mandrakizay ». Aoriana kely ao dia ambaran’i Jesoa tamin’ireo Jody niady hevitra taminy hoe: « Rahefa voasandratrareo ny Zank’olona vao ho fantatrareo fa izaho no izy... » (Jn.8, 28). Ambarany ihany koa hoe : « rehefa tafasandratra hiala amin’ny tany aho dia hitarika ny olona rehetra hanatona ahy » (Jn .12, 32-33).
Fanafintohiana ho an’ny Jody, hoy Md Paoly, ny hoe Mesia (Kristy) voafantsika ; hadalana ho an’ny Jentily, fa ahatsapan’izay voantso kosa ny Hery sy Fahendrenan’Andrimanitra (1Kor.1, 22-23). : Voavonjy tamin’ny fahafatesana izao tontolo izao ; voaro tamin’ny fitaky ny « bibilava » nahavoa an’i Adama sy Eva ; afaka tamin’ny fanandevozana sy ny fambabon’ny fahotana.
« Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany tamin’izao tontolo izao, mba hitsara… fa hamonjy an’izao tontolo izao ». Eo antsasa-dalan’ny karemy ihany koa isika amin’izao Alahady fahefatra izao, tahaka ny vahoaka Israely nahavita ny antsasa-dalana tamin’ny dia tany an-antaniefitra. Tsy fotoana hijanonana intsony amin’ny fahotana, fa fotoana handinihana lalina ny famindram-pon’Andriamanitra. Na dia nanota tao anatrehan’ny Tompo aza ny vahoaka Israely ka lasan-ko babo tany Babilona, dia notsenain’Izy Tompo famindram-po ka nampodiany ho firenena afaka indray (Vakiteny voalohany). Fony mbola matin’ny fahotana aza isika dia novelomin’Andriamanitra ao amin’i Kristy indray, noho Izy Ray manankarena amin’ny famindram-po sy noho ny halehiben’ny fitiavana izay nitiavany antsika (vakiteny faharoa).
« ... fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana, mba hiharihary ny asany, fa atao amin’Andriamanitra ». Fotoana fanapahan-kevitra sy fandraisana safidy (fibebahana) àry izao: Hanatona an’i Kristy fahazavana; hanao toy ny nataon’i Nikodema, ilay nanatona an’i Jesoa tamin’ny alina. Tao anatin’ny haizina i Nikodema no nanatona an’i Jesoa. Nambaran’i Jesoa taminy ny marina ka nampiova ny fiainany izany. Tsy hisalasala instony izy aoriana ao, fa handray anjara mavitrika amin’ny fandevenana an’i Jesoa, fa ho sahy hijor sy hiseho vahoaka, haneho marina fa mpianatry ny Tompo ihany koa izy na dia Loholona teo amin’ny Jody aza. Fotoana fanapahan-kevitra sy fandraisana safidy izao : Hanatona an’i Kristy voasandratra, hibanjina Azy loharanom-pamonjena; hisandratra miaraka Aminy ho any amin’ny Ray.
Mitsangana ka banjino Ilay andry ijoroan’ny Finoantsika...